यस्ता छन्‌ सधै सुन्दर र जवान रहने सुत्र – Janapriyakhabar
मुख्य पृष्ठ / जीवनशैली / यौन/स्वास्थ्य
यस्ता छन्‌ सधै सुन्दर र जवान रहने सुत्र
२ चैत्र २०७६, आईतवार प्रकाशित
सधैं युवा देखिन कसलाई मन पर्दैन र ? मानिसहरु युवा देखिनकै लागि बुढेशकालमा समेत धेरै मेहनत गर्ने गर्छन् । तर, व्यवस्थित जीवनशैलीले मानिसलाई बुढेशकालमा समेत तन्नेरी देखाउन मद्दत गर्छ । मानिसको आयुसँगै मानिसको छालाले बुढ्यौलीको संकेत दिने गर्छ । तर, त्यसबाट बच्नको लागि कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ ?
साथै यसले डिप्रेशन, मुटुको रोग, मधुमेह लगायत रोगबाट बचाउन पनि सहयोग पुर्‍याउँछ । ५० प्रतिशत मानिसलाई घरभित्रै रहनाले भिटामिन डीको अभाव हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको थियो । दिनमा केवल १५ मिनेट मात्र घाममा बस्नुले पनि मानिसको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर पार्न सक्ने अध्ययनको दाबी छ । विशेषगरी बृद्ध मानिसको लागि घाममा बस्नु राम्रो हुन्छ ।
टिभीबाट टाढा रहनु
अनावश्यक जोखिमबाट टाढा रहनु
अनावश्यक जोखिमबाट टाढा रहनुले पनि मानिसले आयु बढाउन सहयोग गर्छ । विशेषगरी युवाहरुमा यस किसिमको समस्या देखिन्छ । धेरै युवाको मृत्युको कारण दुर्घटना, चोटपटक र हिंसामा हुने गरेको छ । त्यसका साथै चुरोट पिउने लगायतका खराब बानी पनि छाड्नु राम्रो हुन्छ
रूरू जलविद्युतको आइपिओ आज बाँडफाँड हुँदै
सिंगटी हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट, नतिजा यसरी हेर्नुस्‌
तामाको भाँडामा पानी पिउदा स्वास्थ्यमा हुन्छ यस्ता फाईदा
फागुन मसान्तसम्ममा ६ खर्ब ३ अर्ब ९२ करोड राजस्व असुली
वास्तु ज्ञान: घरमा कहिल्यै नराख्नुस् यस्ता वस्तुरु
विश्व बैकले नेपाललाई कोरोना रोकथाम र खोपका लागि ८.७ अर्ब रुपैयाँ दिने
कर्णाली प्रदेशमा ९१ प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमित निको
हुम्लामा १ सय २४ जनामा लक्षण विना कोरोना सङ्क्रमित
धुलिखेल नगरपालिकाले कोभिड-१९ बाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई किरिया खर्च १५ हजार दिने
एकै दिन २४६ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
उपत्यकामा ३ हजार ९८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि